Caadooyinka halista ah ee haweenka, sida loo ogaado oo looga takhaluso
Cosmetics iyo perfumery
Manicure iyo pedicure
Waxqabadyada waqtiga firaaqaha
Cilmi-nafsiga iyo horumarinta
Nolosha shakhsiga ah
Markaad si lama filaan ah u dhahdo: "Ka fogow caadadan! Waxay tahay nacas! "- waxaad noqonaysaa" raaxo la'aan ", sax? Muxuu yahay ... Waxaan had iyo jeer goosanayaa kibis ... Sidii naftayda ... Anigu marwalba waan qurxoonahay tv-ga hortiisa ... Anigu aad baan u fahmay! Sababtoo ah caadooyinkeena wax ka badan ma nihin. Shakhsiyadeena. Taasi waxaan ku jirnaa indhaha dadka kale. Qoraalkan marka hore waxa uu u muuqdaa mid qarsoodi ah, haa?
Bal aynu eegno qoto dheer. Maxay kuu qaban karaan adiga kugu saabsan? Inta badan, ma ahan wax ku filan: waa gabadha, isku dhafka, dhar xidhashada, indhaha madow iyo timo madow. Ogeysiiska ugu muhiimsan ee la ogaanayo: waxay u muuqataa in ay jaceyl ku jirto, ama: wax nolosheeda ah maaha sidaas. Miyaad ku raacsan tahay in sharaxaad ka bixisa dadka ku soo noqnoqonaya-ku siiya, waa adiga? Maya? Dabcan! Ma garanayo shakhsiyaadkaaga.
Iyo sidee, tusaale ahaan, kuu tilmaami lahaa nin, tusaale ahaan, inuu kula noolaan lahaa 24 saac maalintii?
Waxay horey u soo baxdaa, maydhay, dharka, waxay jecel yihiin in ay daawadaan TV iyo la sheekeystaan ​​asxaabta, jecel yahiin socodka sawirada iyo riyooyin ah inay la kulmaan nin dhab ah. More sida runta? Fiiri, waa sababtoo ah qofku wuxuu sharaxay caadooyinkaada: hore u kac, maydh, daawo TV, la sheekeysasho asxaabta ... Maxaa kale oo aad ku dari kartaa sharaxaaddaada? Maxaan ku filneyn inaad sharaxdo shakhsiyaadka, marka laga reebo tirinta caadooyinkaaga ?
Caadooyinka qaarkood waxaa loogu talagalay sababo la yiraahdo waxyeello.
Caado xumo waa wax kaa horjoogsanaya inaad kaamil noqoto; sida aad jeclaan lahayd inaad noqotid, oo aad samayso waxa aad tahay. Cows-ka cowsku ma aha mid caado u xun oo loogu talagalay dadka jecel in ay xoolahooda ku beeraan jidhkooda oo ay ka fikiraan in saxnaanta ay tahay wax badan oo "dhalinyaro caajis ah." Laakin subaxdii waxay ku noqon kartaa caado xun oo ah qof si firfircoon u doonaya in uu koro baruurta.
Dabcan, tusaalooyinkani waa joornaal. Marka lagu daro xiriirka shakhsi ahaaneed, waxaa kale oo jira arrin bulshadeed: Caado xun ayaa ah wax kaa hortaagan inaad noqoto mid ku habboon indhaha "dadweynaha". Si aan u qirto, aniga qudhaydu ma garanayo cidda ay tahay - "dadweynaha". Macalimiintu waxay ku magacaabaan "bulsho", cilmi-nafsi-yaqaan - "miyir la'aanta ah", siyaasadda - "ra'yiga dadwaynaha" ... Qofkee ayuu yahay - lama yaqaan. Laakiin waxa ay tahay, waxa ay qeexayaan sharciyadeeda oo saameynaya dhaqankayaga iyo caadooyinka waa hubaal.
Waxaan u maleynayaa in dhagaysiga ra'yiga "dadweynaha", oo aanad ka baxsan karin, ragga aan si aad u culus u dhicin, waa inaan dhagaysannaa nafteena oo go'aansanaa: waxa kaa hortagaya inaad ku noolaato habka aad jeclaan lahayd. Fikradda daqiiqad ka dib, adiga ayaa ka jawaabi karta su'aashan. Dhanka kale, waxaan ku qori doonaa caadooyinka ugu caansan ee ka hortagaya noolasha "buuxda", kaas oo "cuni doona" waqtigeena, in aan kantaroolno nolosheena waxaanan ka hortageynaa inaan gaarno waxa aan ku guuleysan karno.
Waad kicin kartaa
Taasina waxay ka bilaabantaa tan. Saacad kaddib ayaad tagtaa, ka hor intaadan tegin, si dhakhso ah ayaad u dhaqaysaa wejigaaga, quraacda, si deg deg ah u codso qurxiyo - maalintuna waa isku mid "shumi".
Waxaa laga soo xigtey : badanaaba waa diiqad. Aad ayay u fiicantahay in sariir saa'id ah la seexdo daqiiqad, gaar ahaan qof qof u dhow. Si kastaba ha noqotee, waxaa dhacaya in qofku uu soo tooso xilli dambe sababtoo ah ma uusan raaxeysan maalinta xigta, wuu ka baqayaa isaga ...
Cawaaqi : qofku wuu joojiyaa wakhtiga, waqtigana wuxuu bilaabaa inuu qof waliba ka saaro: "cadaadis", "cunaha qaata" oo kugu qasbo inaad samayso waxa aanad rabin inaad samayso.
Sidee loo tirtiraa : saacad goor hore. Fiidka, diyaariso "fikradda wanaagsan ee maalinta xigta", qorsheyso kulan wacan ama fikrad macaan. Tusaale ahaan, hadaad soo kacdid, maskax ahaan qor qoraalka: la kulan ragga riyadayda ah , ama aan ku guuleysto shaqada. Marka aad riyooto - isla markiiba kor u kaca sariirta si aaney jirin wax damqasho ah oo lagu soo celin karo halkaas, oo samee waxyaabo fiican: daaqada fur oo cab cabitaan koob. Dhageeyso muusikada. Ku fadhiiso aamusnaanta ama sameyso wax fiican.
Natiijada : waxaad kordhin doontaa noloshaada ugu yaraan saacad. Kadib - saacad kale ... Waxaan kuu sheegi doonaa qarsoodi in dhakhaatiirta nafsiga ahi ay heleen qiyaasta hurdada ee qofku maalintii: 5 saacadood - caadi, 6 saacadood - wax yar, 7 saacadood - wax yar, iyo 8 - mar kale caadi ahaan. Ma fahmeysaa? Waxaad ku noolaan kartaa 19 saacadood maalintii!
Dib udhigista ballamaha, shirarka, diyaaradaha iyo tareenada ayaa ah hab kale oo lagu yareeyo noloshaada. Intaa waxaa dheer, in aadan u muujin ixtiraamka dadka ku sugaya, waxay joojiyaan in ay si dhab ah kuugu qaadaan.
Waxaa laga soo xigtey: Inta badan, ma rabtid inaad tagto meesha aad ku socoto. Jahawareerka, "jajabyada taraafikada" ee waddooyinka, "illowday lacagta guriga" - kuwani waa cawaaqib kaliya.
Cawaaqi: waxaad joojisaa inaad aaminto waxyaabo muhiim ah oo aanad culus ahayn - sida qof aan guulaysan.
Sidee loo tirtiraa: marka hore iskuday inaad tagto shirarka, halkaas oo aadan rabin inaad tagto. Markaa waxaad yareyn doontaa tirooyinka dib u dhaca ugu yaraan laba jeer. Kadib, ha degdegin. Xitaa xitaa kulankaas, oo wali la magacaabay, wac oo ka noqo. Keliya horay u wac. Haddii aad weli tahay inaad tagto, ka fakarto oo fahantid naftaada: maxaa kaa joojiya? Raadinta "caqabadaha", waxaad si fudud uga gudbi kartaa iyaga. Ama ha u gudubin - markaad go'aansatid.
Natiijada : waxaad "nadiifin" noloshaada xiriirka aan loo baahnayn iyo amar. Si aad u timaadid waqti waa arji loogu talagalay nolosha halis ah.
Ha ilaawin ballanqaadyada
Miyaad xusuusataa inta aad horay u ballanqaaday inaad ku soo booqato awowgii hore? Oo waxaad illowday wax walbana ... Dabcan, waxaad igu tiri inaan hoos u dhigi doono sababtoo ah waxay ahayd mid aan ku raaxaysaneynin diidmada ... Laakiin ma aan tegin! Oo iyana way sugaysaa oo way xusuusan doontaa. Iyo ugu muhiimsan - aad xusuusto! Waxaa laga soo xigtey: Waxay u badan tahay, inaadan rabin inaad disho, ama halkii - waxaad ka baqaysaa inaad noqoto mid xun, oo aan waxba galabsan, oo aan xishood lahayn. Taasi waa sababta aad u ballan qaadday.
Cawaaqi: Haddii aadan fulin ballamadan, ma aha inaad noqotid waxa aad ka cabsaneysid, weli waxaad noqotaa qof aan lagu kalsoonaan karin: waad ballan qaadday oo aadan sameyn - waa ka xun tahay inaad diidid.
Sidee looga takhalusaa: baro inaad "tiraahdo". Ka dib markaad barato sida loo diido , ballan u qaado sida ugu dhakhsaha badan. Sababtoo ah ganacsigii aan dhameystirneyn wuxuu saameyn ku yeeshay "fal aan dhammaystirnayn". Waxaa lagu dhejiyaa "RAM" oo ha u ogolaanin inaad si dhakhso ah oo firfircoon uga shaqeyso.
Natiijada : waxaad samayn kartaa camallo wanaagsan oo aad ku raaxeysan kartid. Mahadsanid, oo lagu kala qaado indhaha, falalka iyo "abaalmarin ka timid meel bannaan", waxay si weyn u wanaajinaysaa tayada noloshaada. Si aad uga takhalustid caado xun waxaa suurtogal ah in hal mar uun la sameeyo - si aad u bedesho mid cusub - faa'iido leh. Kaliya xusuusnow: markii ugu horreysay waxaad ku farxi doontaa inaad ku dhaqanto hab cusub, labaadna - sidoo kale, sida caadiga ah, saddexaad - si toos ah, afraadkii - waxaad dhumin doontaa xanuunkaaga ... Halkaana waa inaad isu qaadataa oo aad sii waddo. Ha jiro kun kacleeyaal "ka soo horjeeda", laakiin waxaa jira hal "for" - noloshaada ayaa isbeddelaya. Iyo wax kale. Caado ayaa la sameeyaa 40 maalmood. Tani waxaa lagu ogaaday cilmi-nafsiyaadka. Ku dhagan 40 maalmood. Ka dibna - waxaad arki doontaa horumarinta noocan oo kale ah, kuwaas oo kaliya oo aad u dareen ah.
Xeerarka diidmada niyadda:
U sheeg erayada ku jira cod deggan, kalsooni leh. Waxay sii fiicnaan doontaa haddii garbaha la toosiyo iyo labada lugoodba si adag u istaagaan dabaqa.
Si aad uga bilawdo weedha waa lagama maarmaanka u ah ereyada: Tani ma sameyn karo.
U hubso inaad sharaxdo laba ama saddex erey oo sababta aadan u sameyn karin. Sidaas ayaad u muujineysaa ixtiraamka codsiga qofka oo ha caayin diidmo.
Haddii sharaxaadaagu ka badan yahay lix eray - tani waa sharaxaad xun. Iska yaree.
Ha raali gelin. Waxaad leedahay xuquuq isku mid ah oo aad diidid, sida uu u weydiisto. Samee waxa aad dhab ahaanti karto oo aad rabto inaad sameyso.
Ha degdegin. U ogolow qofku inuu fahmo in aad maqashay isaga, la fahmay, dhab ahaanna isaga ma caawin karo.
Ha wadin wadahadal. Wadaxaajoodka oo dhan waa in uu la kulmo laba calaamadood: codsi waa diidmo.
Gabdhaha ka tirsan bulshadaada ma ka fogaan karaan inay kaligood noqdaan
Maxaa loola jeedaa in ay noqoto mid xishood leh oo xiriir la leh ninkeeda?
Jacayl iyo lacag
Sida loo xalliyo xaalada adag ee gacmahaaga
Goorma ayay raggu qaylinayaan dumarka?
Maxay dadku isku dayaan inay noo tilmaamaan?
Sidee ugu fiican xalinta khilaafka qoyska?
Kukiyada "Shingles Coconut"
Talooyin waxtar leh oo ku saabsan daryeelka kabaha
Nafaqada daba dheeraatay, daaweynta qulqulka
Marka gabadhu ka tagto ninka, maxaa hadda la yidhaahdaa?
Salmon leh suugo kareem
Maraq digaag leh bur saliid, celery iyo zucchini
Sidee loo ciqaabi karaa carruurta si sax ah
Falanqaynta ilmaha ee sanadka ugu horeeya noloshiisa
Caabuqyada xubnaha taranka dumarka
Qiimaha shan-maalin ee xagaaga
Qaabka sicirka ee quruxda
3 timo qurux badan oo loogu talagalay koofiyadaha: midkee ayaa kuu fiican?
Maqaarka qallalan ee wejiga: daaweynta guriga
Hababka qurxinta leh ee la yidhaahdo hyaluronic acid
© 2021 so.inditics.com